Ungazivimba Kanjani Izinjini Zokucinga ku-Indexing WordPress | Martech Zone
Ungazivimba Kanjani Izinjini Zokucinga kusuka ku-Indexing WordPress
NgoMgqibelo, Januwari 23, 2021 NgoLwesine, ngoMashi 24, 2022 Douglas Karr
Kubukeka sengathi njalo iklayenti lesibili esinalo linendawo ye-WordPress noma ibhulogi. Senza ithani lokuthuthuka okwenziwe ngokwezifiso nokuklama ku-WordPress - konke kusuka ekwakhiweni kwama-plugins ezinkampani ukwenza uhlelo lokuhamba komsebenzi wevidiyo kusetshenziswa amasevisi wefu we-Amazon. WordPress akusilo ikhambi elilungile ngaso sonke isikhathi, kepha liyaguquguquka futhi sihle kakhulu kulo.
Izikhathi eziningi, sibeka izingosi esiteji ukuze amakhasimende ethu abukeze futhi ahlaziye umsebenzi ngaphambi kokuwubeka bukhoma. Kwesinye isikhathi singenisa nokuqukethwe kwamanje kweklayenti ukuze sikwazi ukusebenza kusayithi langempela elinokuqukethwe okubukhoma. Asifuni ukuthi i-Google idideke ngokuthi iyiphi isayithi real indawo, ngakho-ke thina khubaza izinjini zokusesha kusuka ekukhombeni isayithi usebenzisa inqubo ejwayelekile.
Ungazivimba Kanjani Izinjini Zokucinga Ku-WordPress
Khumbula ukuthi vimba kungaba namandla kakhulu ithemu. Kunezindlela zokuvimba abakhasi benjini yokusesha ekufinyeleleni isayithi lakho… kepha esikwenzayo lapha ukubacela nje ukuthi bangakhombi isiza emiphumeleni yabo yokusesha.
Ukwenza lokhu ngaphakathi kwe-WordPress kulula. Kuhlelo Amasethingi> Ukufunda imenyu, ungamane uhlole ibhokisi:
Ungazivimba Kanjani Izinjini Zokucinga Usebenzisa iRobots.txt
Ngokwengeziwe, uma ukwazi ukufinyelela kumkhombandlela wewebhu yezimpande isayithi lakho likuyo, unga futhi shintsha i-robots.txt yakho ifayela ku:
Umenzeli womsebenzisi: * Ungavumeli: /
Ukuguqulwa kwe-robots.txt kuzosebenza kunoma iyiphi iwebhusayithi. Futhi, uma usebenzisa i-WordPress, i I-plugin ye-Math SEO Plugin inika amandla ikhono lokuvuselela ifayili lakho leRobots.txt ngqo ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi sayo… okulula kancane kunokuzama ukungena kwi-FTP kusayithi lakho bese uhlela ifayili ngokwakho.
Uma wenza uhlelo olungakaqedwa, ukufaka isoftware esizindeni esihlukile noma isizinda esingezansi, noma ukwakha isiza esiyimpinda ngesizathu esithile - kuhle ukuvimba izinjini zokusesha ekukhombeni isiza sakho nokuyisa abasebenzisi bezinjini zokusesha endaweni engafanele!
Tags: vimba i-bingvimba idadagovimba izinjini zokuseshaisikhundla se-math seo pluginrobots.txtWordPressizilungiselelo zokufunda ze-wordpressizilungiselelo ze-wordpress
I-Animaker: Do-It-Yourself Animation Studio, Isihleli Sokumaketha Ividiyo, kanye Nomakhi Wezikhangiso Zevidiyo
Ukuqeqeshwa Kwemakethe Yedijithali